Tantaran'ny Fampandrosoana - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Fanamafisana entona voajanahary
Orinasa LNG Liquefaction
Unity famokarana hydrogène
Fitaovana famokarana entona
Sichuan Jinxing Clean Energy equipment Co., Ltd. dia naorina., Manampahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy serivisy compressor isan-karazany, LNG, fitaovana fanadiovana solika sy entona, fitaovana fanerena ary fantsona fanerena.
Sichuan Rongteng automation equipment Co., Ltd., dia naorina, dia orinasa teknolojia avo lenta mampiditra ny famolavolana, ny famokarana, ny varotra, ny fametrahana ny injeniera ary ny serivisy aorian'ny fivarotana ny fitaovana automatique feno sy ny mpamokatra entona.
Niditra tao amin'ny indostrian'ny entona voajanahary izahay.
Sichuan Hengzhong angovo madio feno fitaovana famokarana Co., Ltd., dia naorina. Izy io dia sampana iray manontolo an'ny Sichuan Jinxing clean energy equipment Co., Ltd. Ny orinasa dia mpanome tolotra manokana amin'ny famolavolana, R&D, famokarana, fametrahana ary fampandehanana ireo fitaovana feno ho an'ny fitsaboana menaka maloto, lohan'ny lavaka. fitsaboana, fanadiovana entona voajanahary, famerenana ny hydrocarbon maivana ary ny fitrandrahana entona voajanahary amin'ny sehatry ny solika sy entona isan-karazany.
Mifindra any amin'ny toby famokarana vaovao izahay.
Amin'ny taona 2019
Sichuan Rongteng dia nanao ny varotra iraisam-pirenena ny orinasa vondrona manontolo.
Nikaroka sy namolavola mpamokatra entona izahay.
No. 8, Fizarana 2 amin'ny Tengfei Road, Shigao Subdistrict, Tianfu New Area, Meishan city, Sichuan China 620564
Tanjona amin'ny fikarakarana mialoha ny orinasa LNG
Nandalo tamin'ny fanombanana ny zava-bita nandritra ny fotoana fohy ireo tetikasa siantifika sy teknolojia lehibe